विचार / विश्लेषण फेसबुकका 'महान आत्मा'लाई दिपकराज गिरीको यस्तो जवाफ !
Friday, 28 Oct, 2016 10:51 AM
काठमाडौं, १२ कात्तिक–सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कलाकार दिपकराज गिरीलाई केहि व्यक्तिले दिएको सुझावको जवाफ गिरीले फेसबुक मार्फत नै दिएका छन् । शुक्रबार विहान उनले लामो स्टाटस लेख्दै फेसबुकका 'महान आत्मा'लाई समर्पण गरेका छन् ।
उनलाई केहि व्यक्तिले फिल्म बनाएर पैसा कमाउनुको सट्टा धुर्मुस–सुन्तलीले जस्तो सामाजिक काम गर्न सल्लाह दिएका रहेछन् । आफुलाई फलानाले जस्तो गर, यस्तो गर, त्यस्तो नगर भनेर पटक–पटक सिकाउनेलाई उनले संयुक्त जवाफ यसरी लेखेका छन् ।
‘कस्ले भन्यो चलचित्र पैसा कमाउन बनाइन्छ ? एउटा चलचित्र बनाउँदा ९० प्रतिशत डुब्ने सम्भावना हुन्छ, केवल १० प्रतिशत चलचित्र मात्र सफल हुन्छन् । नेपालमा एक करोडको लगानी गरेर एउटा स्तरीय रेष्टुरेन्ट खोल्ने हो भने जिन्दगीभरलाई कमाउने बाटो हुन्थ्यो, तर हामीले चलचित्र बनाएर जोखिम उठायौं ।’ चलचित्र बनाउनु, समाजको यथार्थलाई पर्दामा उतार्र्नु ,कविता लेख्नु, पुस्तक लेख्नु, पैसा कमाउन मात्र गरिएको काम हो ?’ भन्दै उनले आफूलाई गाली गर्नेलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले थपेका छन्, लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाले थुप्रै साहित्य कृति छोडेर गए जुन पुस्तकहरू अहिले तपाईं हामी पढिरहेका छौँ । के उनले कविता लेख्न छोडेर समाजसेवा गर्नु पर्थ्यो ? उनले पैसा कमाउनका खातिर मात्रै सृजना गरेका थिए ति कृतिहरू ? नारायण गोपालले पैसा कमाउन मात्रै गाएका थिए ?
सॉघुरो सोँच नराख्नुस्
समाज सेवा गर्नु पुन्यको काम हो , त्यो काम गर्नेहरू महान हुन तर संसारका सबै महिलाहरू मदर टेरेसा भएको भए यो संसार चल्थ्यो ? उनले प्रश्न गरेका छन् । के तपार्इं हाम्रा मदरको पनि छुट्टै महत्व छैन समाजमा ?
कसैसँग कसैलार्इ तुलना नगर्नुस्
सबैको काम त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजसेवा संसारको एउटा मात्रै बिकल्प होइन । आफूले लागेको क्षेत्रबाट केहि उपलब्धिपूर्ण नतिजा समाजलाइ दिन सक्नु पनि राष्ट्बाद हो । आफ्नो पेशामा सतप्रतिशत इमान्दार भएर काम गर्नु पनि समाज सेवा हो । हामिले त गर्यौँ र गरेको महसूस पनि छ । तर तपाइ जस्ले फेसबुकमा धुर्मुस जस्तो बन, सुन्तली जस्तो बन्नु भनेर अरू पेशाकर्मी, कलाकार साहित्यकारलाइ कमेन्ट गरेर बस्नु हुन्छ, तपाइले अब आफूलाइ प्रमाणित कहिले गर्ने ? कि फेसबुक कमेन्टस् मै पिएचडि गरेर मात्रै बस्ने ?
एउटा असल पेशाकर्मी भएपछि आफूले भिन्न भिन्न पेशा गर्दा कमाएको केहि हिस्सा गरिब दुखिको लागि पनि खर्चिनु पर्छ , सहयोगी हुनु पनि पर्छ तर, वकिल, डाक्टर, कबि साहित्यकार , ब्यापारिहरू सबैले आआफ्नो कार्यालयमा ताला लगाएर, काम बन्द गरेर समाजसेवा तिर नै लाग्ने हो र ?
अस्ट्रियाका कलाकार फेड्रिक ग्रिफले सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकम भूकम्पपीडितलाई पठाए पाइरेसीका कारण हलमा चल्दै गरेको फिल्म 'छक्का पञ्जा' युट्युबमा मुस्ताङमा पर्यटकको ओइरो एक बर्षमै ३९ हजार पर्यटकले भ्रमण गरे
धुर्मुस सुन्तली सम्मानित